छ कोही महावीर जसले दिलशोभाको एकोहोरो होइन, दोहोरो यौनिक संवादको टेलिफोन टेप सुनाउन सकोस् । यदि छैन भने मन नलाग्दा-नलाग्दै भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले यौन दुराचारको हेडलाइन बनाउन धेरै हतारो गर्‍यौं ।
बुधबार बिहान नागरिक दैनिकको हेडलाइन पढनेबित्तिकै म स्तब्ध भएँ । दिलशोभा श्रेष्ठमाथि यौन दुराचारको संगीन आरोप लगाइएको रहेछ । एक मन त लाग्यो, त्यो दैनिकका प्रधानसम्पादक मित्र प्रतीक प्रधानलाई फोन गरेर थप जानकारी लिउँ । कतै समाचार छापिने रात प्रतीक बिदामा पो थिए कि ? अथवा हेडलाइन राखिने बेला कसैले जजमेन्टल इरर त गरेन भन्ने शंका लाग्यो । हामी पत्रकार पनि मानव हौं, हाम्रो हातबाट पनि गल्ती हुन्छन् ।
तर फेरि, मेरै मनको शंकालु कुनाले भन्यो- कतै साँच्चै दिलशोभामाथि लगाइएको यौन दुराचारको आरोप सत्य पो हो कि ! कसैले जीवनमा एकपटक राम्रो काम गरेको छ भन्दैमा उसले सधैं राम्रो नै गर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने विचार मनमा आउन थाल्यो । मानव मनको एउटा कुना नकरात्मकताले बनेको हुन्छ । कसैको बारे पनि हामी राम्रोभन्दा नराम्रो खबर छिटो पत्याउँछौ । त्यसमाथि त्यति प्राथमिकतासाथ छापिएको समाचार सत्य पो हो कि भन्ने शंका उठ्यो । त्यो शंकाले मन उदास भयो ।
के संसारमा आदर्श मरिसक्यो ? दुई बर्षअघि आफूले अन्तर्वार्ता गरेको दिलशोभा श्रेष्ठको मुहार झलझली आँखासामुन्ने आयो । मेरो मन भारी भयो । मेरो उदासीको कारण दिलशोभामात्र थिइनन् । यस्तो घटनाबाट मानिसको बिश्वास समाजसेवा जस्तो पावन कर्मबाटै उठ्यो भने समाज कसरी अगाडी बढ्ला भन्ने पीरले म बढि छटपटाएँ । देशभरि छरिएका असंख्य समाजसेवी र तिनका निम्ति आफ्नो गाँस काटेर दान दिने हजारौ नेपालीलाई सम्झेर उकुसमुकुस भएँ । मलाई पनि मनपर्ने, रविन्द्र मिश्रले अगुवाइ गर्ने पत्रकारिताको लोककल्याणकारी आयामको भविष्यका निम्ति म बेचैन भएँ । प्रश्न दिलशोभाको मात्र होइन, प्रश्नको प्रभाव धेरै फराकिलो दायरामा पर्ने देखिएकोले मैले प्रथम वाक्यमा नै एक दैनिक भन्ने चलनचल्तीको घुमाउरो शब्द प्रयोग नगरेको हुँ ।
१) यौन दुराचार आरोपको मूलआधार दिलशोभाको टेलिफोन रेकर्डिङ लाई बनाइएको छ । दिलशोभा श्रेष्ठले आवाज आपmनै भएको स्विकार गरिसकिन् । तर यो पनि भनिन्, हो, म काम गर्नेलाई राती सुत्न पठाउँथे, तर एउटा अशक्त बृद्धासँग । टेलिफोन टेप गर्ने वा त्यसको हवाला दिएर समाचार लेख्नेले दिलशोभा श्रेष्ठको एकोहोरो आवाजको रेकर्डमात्र बजारमा ल्याएका छन् । लाइनमा अर्कोपट्टि को थियो ? कुन सन्दर्भमा कुरा भएको थियो ? भन्ने विचारै नगरि कसरी ठोकुवा गरियो कि टेलिफोन प्रसंग यौन दुराचारसित सम्बन्धित थियो भनेर ! छ कोही महावीर यो शहरमा, जसले दिलशोभाको एकोहोरो होइन दोहोरो यौनिक संवादको टेलिफोन टेप सुनाउन सकोस् । यदि छैन भने मन नलाग्दा-नलाग्दै पनि भन्नैपर्ने हुन्छ, हामीले यौन दुराचारको हेडलाइन बनाउन धेरै हतारो गर्‍यौं ।
एकैछिनका लागि मानिलिउँ, कुनै महावीरले कथित दुराचार प्रमाणित गर्ने रेकर्डिङ बजारमा ल्यायो रे । त्यस अवस्थामा पनि दिलशोभाका निम्ति यौन दुराचार शब्दको प्रयोग भाषिक दृष्टिकोणले सरासर गलत र कानुनी हिसाबले बचकाना हुन्छ । त्यस अवस्थामा यो आरोपलाई देहव्यापार वा मानव बेचबिखन शिर्षक अन्तर्गत राखिनु पर्थ्यो । भाषागत हिसाबबाट त्यो शब्दावलीको प्रयोगले बताउँछ, हाम्रो पत्रकारिता शब्द चयनमा कति गरिब छ भनेर । शब्द चयनको दरिद्रताले शंका जन्माउँछ, आरोपको छनौटमा पनि कतै हामी चुक्यौ कि ?
मलाई थाहा छ, पत्रकारले विमानचालकको जस्तो आचारसंहिता पालन गर्न सम्भव हुँदैन । विमानचालकको आचारसंहितामा भनिएको हुन्छ, तिम्रो पहिलो गल्ती नै जीवनको आखिरी गल्ती हुनेछ । पत्रकारितामा काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन्छन् । मबाट पनि अन्जानमा भए होलान् । तर, व्यावसायिक पत्रकारितामा कुनै साधारण नागरिकको इज्जतसित जानाजान रत्यौली गरिएको छ भने त्यो पत्रकारको आखिरी गल्ती हुनुपर्छ । यो पेशाको मर्यादाले पटकपटक गल्ती गर्ने छुट दिदैन ।
दिलशोभा श्रेष्ठमाथि प्रथम पृष्ठको हेडलाइनमा लगाइएको यौन दुराचारको आरोप कुनै साधारण आरोप होइन । राजनीतिक नेता वा कर्मचारीमाथि बेलाबखत लगाइने हलुका वा भारी आरोपजस्तो पनि होइन यो । यदि आरोप प्रमाणित हुन्छ भने दिलशोभालाई कानुनमा लेखिएभन्दा बढि सजाय हुनुपर्छ । किनभने त्यस अवस्थामा उनले असंख्य मानिसको आस्थामा कुठाराघात गरेको दण्डसमेत सजायमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । तर यदि कथित यौन दुराचार प्रमाणित भएन भने के ? यो प्रश्नले धेरैलाइ चिमोटिरहेको छ । सबैले बडो गहिरो तवरले बुझ्न जरुरी छ, मानिसको अन्तिम सम्पत्ति भनेको उसको अस्मिताको मर्यादा हो । यसमाथि अकारण हस्तक्षेप बलात्कार हो ।
२) आरोप प्रकाशमा आएको भोलीपल्टदेखि टेलिफोन टेप प्रसंगको उल्लेख हुनै छाड्यो । किन ? २४ घन्टा पनि टिक्न नसक्ने त्यो कस्तो टेप हो ? यो प्रश्नको उत्तर यस प्रसंगमा मात्र होइन, भविष्यका लागि पनि अपरिहार्य छ । यदि टेलिफोनको प्रसंग काल्पनिक थियो भने अब भविष्यको नेपाली पत्रकारितामा टेलिफोन रेकर्डिङका आधारबाट उत्पादित सबै सामग्रीको विश्वसनियतामाथि एकपटक शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । यो शंकाले गर्दा भविष्यमा अडियो रेकर्डिङको माध्यमबाट गरिने कुनै पनि वस्तुगत खोजमुलक पत्रकारिता अपाङ र अविश्वसनिय मानिने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले दोहोर्‍याएर सोध्न चाहन्छु, छ कोही महावीर जसले यौन दुराचार प्रमाणित गर्ने टेप सुनाओस ! यदि त्यो टेप सुनाउन सकिदैन भने सजिलै भन्न सकिन्छ केही गडबड छ । आज टेप सुनाउन नसक्नेले भोली फेरि कुनै नयाँ आइटम डान्स बजारमा ल्याउला । अतः नेपालमा कुनै पनि टेपको विश्वसनियता जाँच्ने उच्चस्तरिय प्रयोगशाला स्थापित गर्नु र अनधिकृत टेलिफोन ट्यापिङ सम्बन्धी कानुन बनाइनु अपरिहार्य भएको छ । बेलायतमा सन अखबारका कैयौं मानिस टेलिफोन ट्यापिङ प्रसंगमा जेल परे । लाज मानेर पत्रकारले राजिनामा दिए । बिश्व सञ्चार जगतका बादशाह भनिने रुपर्ट मर्डोकलाई बेलायती संसदीय समितिले घन्टौं बयान लियो ।
३) अब दोस्रो पाटो । दिलशोभा श्रेष्ठको बृद्धाश्रममा राखिएका बालबालिकाको पाटो । अनुमति नलिइ बालबालिकालाई आफ्नो बृद्धाश्रममा आश्रय दिएर गल्ती भएको उनले खुदै स्विकारी सकिन् । उनले बालबालिकालाई उचित मापदण्ड अनुसार पाल्न सकिनन् होला । राम्रोसँग पालनपोषण गर्न सकिनन् तर दुखम-सुखम भए पनि आश्रय त दिइन भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
अंग्रेजीमा मोटामोटा प्रपोजल लेखेर डलर ल्याउन सक्ने आश्रयस्थलको तुलनामा दिलशोभाको घर र वातावरणको मापदण्ड ज्यादै निम्न स्तरको छ । फोहोर पनि छ । तर जो बृद्धबद्धा सडकमा फालिएका थिए, जसको जाने ठाउँ कतै थिएन, त्यो दिन तिनका निम्ति मापदण्ड नपुगेको त्यही फोहोर आमाघर नै ठुलो कुरा थियो । कुन मापदण्डमा कसले कसलाई कसरी नाप्ने ? के आज औसत नेपालीका बच्चा त्यही मापदण्ड अनुसार हुर्किएका छन्, जो हाम्रो बालअधिकार नियम-कानुनले भन्छ अथवा पाँचतारे बालअधिकार गोष्ठीले भन्छन् ! आज यो मापदण्ड खोज्नेले भोली नेपालमा बच्चा जन्माएर बर्षौ अरबको खाडीमा हराउनु पर्ने बाध्यता बोकेका मातापिताले बच्चाप्रति स्नेहको मापदण्ड पुरा गरेनन् भन्ने आरोप पनि लगाउलान् । मापदण्ड कसले पुरा गरेको छैन ? बाध्यतामा खाडी गएका मातापिताले वा हाम्रो समाज र सरकारले ? आफ्ना नागरिकलाई दुई छाक खान दिन नसक्ने सरकार र समाजमा मापदण्डका ठुल्ठुला कुरा शोभा दिदैन ।
४) अहिले नेपालमा कसै-कसैलाई बालअधिकार मापदण्डको मौसमी ज्वरो आएको छ । हाम्रो गृह प्रशासनले पनि दिलशोभाको आमाघरबाट ३४ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिंदाको अवस्थामा खिचिएको तस्वीरमा बालबालिकाले जाडोको मौसममा ज्याकेट, स्वेटरसम्म लगाएकै देखिन्छ । उद्धार गरेर तिनलाई कुनै दर्तावाल एनजिओमा लगिएको छ । तिनीहरुले अहिलेको भन्दा राम्रो वातावरणमा हुर्कन पाए सबैभन्दा खुसीको कुरा हुनेछ । तर आज म एउटा प्रश्न राष्ट्रसमक्ष र बिशेष गरि बालबालिका हितको निम्ति काम गरेको दावी गर्ने सबैसँग राख्न चाहन्छु । यो प्रश्नको जवाफ मलाई होइन, आ-आफ्नो विवेकलाई दिए पुग्छ ।
बालअधिकार मापदण्डबारे प्रशासन र बालअधिकारवादीको चिन्ता सक्कली हो भने- देशका सडकमा यति धेरै बालबालिका र बृद्धबृद्धा कठाङगि्रएर भोकभोकै किन बसेका छन् ? दिलशोभाको घरमा भएका बालबालिकालाई उद्धार गरियो, राम्रो भयो । तर दिलशोभाको घरभन्दा धेरै दुःखद अवस्थामा रहेकाको सडकबाट उद्धार गरिनु पर्छ कि पर्दैन ? जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर आउँदैन, तबसम्म नेपालमा मापदण्डको बखान एक भद्दा मजाकबाहेक केही हुने छैन । मापदण्डका जाँचकीहरुले यो आलेख पढेपछि सडकमा कुनै असहाय बृद्धबृद्धा वा माग्ने बालबलिका देख्नु भयो भने कृपया यो नभनिदिनु होला, सडकमा नै मापदण्ड पुगेकाले यिनिहरुलाई यतै सुताइएको हो ।
५) दिलशोभा प्रकरणमा रमेश खरेलजस्ता काबिल र विवेकशील अधिकृतको मातहत अनुसन्धान भइरहेको छ । कथित यौन दुराचार वा अन्य मामिलामा दोषी ठहरिए अदालतले सजाय देओस् । तर यदि आरोप प्रमाणित भएन भने ? दिलशोभा यौन दुराचारी प्रमाणित भइनन् भने ?
यो प्रश्नको उत्तरले नेपाली पत्रकारितामा एउटा नजीर स्थापना गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन १७ १२:३८